ကျွန်ုပ် တို့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
ဆက်သွယ်ရန် နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမ
အမ်ဖန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် အခကြေးငွေအနည်းငယ်ဖြင့် အမြတ်အစွန်းမရည်ရွယ်ဘဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသောအစီအစဉ် ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိသော ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် မိမိပုံမှန်ထည့်ဝင်ငွေဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် ရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် အခြားအာရှနိုင်ငံများအတွင်းရှိရွှေ့ပြောင်းလူထုနှင့်ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိသောလူထုများကို ဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ပေးသွားပြီး အာရှဒေသတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးစနစ်တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ အမ်ဖန်းအသင်းဝင်များသည် အနည်းဆုံးအခြေခံလစဉ်ကြေး တစ်ဦးကို တစ်လလျှင်ဘတ်၁၀၀ (၂.၈ ဒေါ်လာခန့်) ပါဝင်ထည့်ဝင်ရုံဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ အမ်ဖန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများတွင် အရည်အသွေးပြည့်မှီသောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်သည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားပေါင်း ၂၂,၀၀၀ ကျော် အမ်ဖန်းအသင်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။
အမ်ဖန်းအနေဖြင့်လည်း ယခုအချိန်ထိ ဆေးခန်းပြသမှုအကြိမ်ပေါင်း ၁၇,၆၇၂ ကြိမ်နှင့် ဆေးရုံတက်ကုသမှုအကြိမ်ပေါင်း ၃,၆၃၉ ကြိမ်ကို ကုန်ကျခံဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ဆေးရုံပေါင်း ၂၇ ရုံနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောဆေးခန်းများတွင် အမ်ဖန်းအသင်းဝင်များအတွက် အရည်အသွေးမှီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်များပေးလျက်ရှိသည်။
1. အမ်ဖန်းဝန်ထမ်းများမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုအမ်ဖန်းအကြောင်းပြောပြခြင်း
2. ရပ်ကွက်အတွင်း အမ်ဖန်း application အသုံးပြု၍ အမ်ဖန်းအသင်းဝင်ပေးခြင်း
3. QR code နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အမ်ဖန်းအသင်းဝင်ကဒ်များကို ပေးအပ်ခြင်း
4. ဆေးရုံမှ active ဖြစ်သော အသင်းဝင်များကိုစီစစ်၍ အမ်ဖန်း၏အခမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိစေခြင်း
စတင်မိတ်ဆက်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ အမ်ဖန်းသည် ဒေသအနှံ့အပြားရှိ ပိုမိုများပြားသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ တာ့ခ်ခရိုင်၌ အမ်ဖန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်သုံးခုတွင်နေထိုင်သောရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအများစုကို ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထိုမှတဆင့် တာ့ခ်ခရိုင်ရှိရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများက မြန်မာပြည်တွင်းတိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တောင်းဆိုလာရာ သြဂုတ် ၂၀၁၉ တွင် မြန်မာဘက်ခြမ်း မြဝတီမြို့တွင် တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သည်။
တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်း အမ်ဖန်း၏အောင်မြင်မှုများကြောင့်လည်း ၂၀၁၉ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ပင် ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ရှိ ဆကဲအိုခရိုင်တွင်နေထိုင်သော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်လည်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ကန်ချနာဘူရီခရိုင်အတွင်းရှိ ဆန်ကလဘူရီမြို့နယ်သို့ ဝန်ဆောင်မှုများထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပြန်ပါသည်။
လိပ်စာ : Dreamlopments Limited, ၆၀/၁ မွန်ရီရင် အဆောက်အဦး၊ အခန်း (စီ)၄၀၂/ဘီ ဖဟိုယိုသင်း ၈၊ ဆမ်ဆီနိုင်း၊ ဖရာထိုင်း ဘန်ကောက် ၁၀၄၀၀
တယ်လီဖုန်း : +၆၆ (၂) ၆၁၅ ၅၁၄၈
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်